precious stone | ပိတောက်
ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအဖိုးတန်ကျောက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ အဲ့ထဲမှာမှ precious stone လို့ခေါ်တဲ့ အဖိုးတန် ပြီးအဆောင်ကောင်းတွေအနေနဲ့သုံးကြတဲ့ကျောက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။
ကျောက်မျက်ရတနာနဲ့ဒီအဖိုးတန်ကျောက်တွေမှာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်၊ ပတ္တမြား ၊ နီလာ၊ စိန်၊ မြ စ
တချို့အဖိုးတန် ကျောက်တွေကရှာရလွယ်ပေမယ့် တချို့ကရှာရခက်ပါတယ်၊ နောက်ပြီးတမျိုးစီက အဓိပါယ် တမျိုးကွဲပါတယ်၊ ဥပမာ Tiger's eyes က ရဲရင့်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောစိတ်ဥာဏ်ကွန့်မြူးခြင်းပေးပါတယ်၊ Petrified wood ဆိုတဲ့ ကျောက်ဖြစ်သွားတဲ့သစ်ကဆောင်ထားရင်အသက်ရှည်သတဲ့ ကျောက်စိမ်းက တော့ အသက်ရှည်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တချို့ကလာဘ်ကောင်းပြီး၊ တချို့ကကောင်းသောအနာဂတ်နဲ့၊ အန္တာရာယ်ကကာ
ကြပါတယ်၊ တချို့တွေကတော့မယုံကြည်ကြပါဘူး၊ ဒါ့ကြောင့်ဈေးဝယ်သူတွေကိုရှင်းပြရင်တချို့ဈေးဝယ်သူ
တွေရဲ့ရယ်သွမ်းသွေးခြင်းကိုခံရပါတယ်၊ ကျောက်ကိုနှစ်သက်ကြတဲ့လူတွေမှာတော့ဘယ်လိုသိမ်းရမယ်၊ ဘယ်လိုဆေးရမယ်၊ ဘယ်လိုရွေးရတယ်ဆိုတာပါသင်ပေးသွးကြတယ်။
There are many precious stones in the world. It is different between Jewelry and precious stones. Jewelry means expensive like as Ruby, Sapphire, Diamond, Emerald ...etc. Those are popular and expensive.
In precious stones some are not easy to find. More difficult to find means more expensive. All precious stones have different meaning. Tiger's eye means brave and good inspriation, Petrified wood means long life and Jade means luck. Some are good luck and some are good fortune and some are protect from dangerous.
The people who love stones believe stone can heal and protect. But some people are not believe, so when I told about the stones they laugh and shake their head. The customer the one who loves stones taught me how to keep the stones, how to clean and how to choose better one.
As for me each one own differences beauty. God created all things.
ရေးသူ ပိတောက် အချိန် 14:08
Labels: about stone